AH: February 2012
Posted by Aung Htut at 2/28/2012 12:25:00 AM2comments
ဘယ်(လ်)ဂျီယံ နိုင်ငံ၊ ဘရူဆဲလ်က Jeroen နဲ့ Kippers တို့အတွဲကတော့ အများနဲ့မတူ တမူထူးခြားစွာဖြင့် အမြင့် ၁၆၀ ရှိတဲ့ စင်ကို ကရိန်းနှင့်မပြီးတော့ ထိုကရိန်းပေါ်မှာ လက်ထပ်ပွဲကို ဆင်နွှဲခဲ့ပါသတဲ့။ ထိုစင်ပေါ်မှာ ဧည့်သည်တော် ၂၀ လောက်က မင်္ဂလာပွဲကို လာရောက် ချီးမြှင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ နောက်ထပ် စင်တစ်ခုမှာတော့ တီးဝိုင်းအဖွဲ့က တီးမှုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ မင်္ဂလာဆောင်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ သတို့သားနဲ့ သတို့သမီးဟာ ထိုစင်ပေါ်ကနေ ကြိုးနဲ့ ခုန်ဆင်း (bungee jumping) ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို ခပ်ကြောင်ကြောင်မင်္ဂလာဆောင်ကိုတော့ “Marriage In The Sky” ဆိုတဲ့ ကုမ္ပဏီက စီစဉ်ပေးပါသတဲ့။
Posted by Aung Htut at 2/26/2012 11:52:00 AM 8 comments
ဟိုးအဝေးကတိမ်တောင်တွေပေါ်မှာ အန္တရာယ်များတဲ့ အိုင်ဒီယာတွေပါသွားသလားလို့ ကြည့်မိ တခဏမှာ
ခင်ဗျားက bulb သီကို လက်နဲကထွန်းညှိလိုက်ပါတယ်
သူမဟာ တစ်ကိုယ်လုံးလှုပ်ရှားမှု့ကို ပရိသတ်ကိုပြချင်လို့ အ၀တ်နက်ခြုံပြီး
၁ က ၅၀ အထိ ရေတွက် လိပ်ပြာကိုလှုပ်လိုက်ပါတယ်
ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ ပြည်ထောင်စုမှာ တောင်တန်းတွေ လှိုင်းတွေနဲ့ ရှေးရိုးယဉ်ကျေးမှု့
ဓလေ့စရိုက်တွေ ဟာမိုနီဖြစ်မဖြစ် စီစစ်ပြီး ကော်ပီလုပ်ရမယ်
အားလုံးဟာ ဗလာတွေပါပဲ အားလုံးဟာ ဗလာတွေပါပဲ ဘယ်လိုပဲပြောပြော
အရှေတီမောရဲ့ နုနုငယ်ငယ်လွတ်လပ်ရေးနဲ့အင်းဒိုနီးရှားရဲ့ ဒီမိုကရေစီ စိမ်ခေါ်ပွဲ
မြန်မာပြည်မှာ ရွေးကောက်ပွဲတွေ စတော့မတဲ့
လူတစ်ယောက်ရဲ့ ခြေ၊ လက်၊ ခန္ဓာနဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးရဲ့ ခြေလက်ခန္ဓာဘာကွာသလဲ
အမှန်လွန်သစ်သီးကို အပ်ချည်ကြိုးနဲ့ ဆွဲချမိတဲ့ ဖြစ်ရပ်
အမှည့်လွန်သစ်သီးကို ဈေးကွက်တင်တဲ့ ကိစ္စ
ဖြစ်သမျှဇာတ်ကြောင်းတိုင်းမှာ လွတ်လပ်တဲ့ ဇာတ်အကျိုးရှိသလား
(၃) ဟန်ကိုယ့်ဖို့လား သူ့ဖို့လား မသိခြင်းတရား
ငြိမ်းဝေ၏ ဂဃနဏ စာအုပ်မှ
Posted by Aung Htut at 2/25/2012 01:12:00 PM3comments
ဘက်စကတ်ဘော လောကရဲ့ နာမည်ကြီးတစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့သူ မိုက်ကယ်ဂျော်ဒန်ကတော့ တရုတ်နိုင်ငံက အားကစားဝတ်စုံတွေ ထုတ်လုပ်တဲ့ နာမည်ကြီး ကုမ္ပဏီ Qiaodan Sports Co. ကို တရားစွဲဖို့ စီစဉ်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ မိုက်ကယ် ဂျော်ဒန်ဟာ ကမ္ဘာနာမည်ကြီး အားကစား ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်လောင်းချတဲ့ ကုမ္ပဏီ Nike နဲ့ ပူးတွဲပြီးတော့ သူ့ကိုယ်ပိုင် အားကစားဝတ်စုံနဲ့ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေကို ထုတ်လုပ်ရောင်းချနေသူပါ။
မိုက်ကယ် ဂျောဒန်ကတော့ “ဒီလိုမျိုး ကျွန်တော့်နာမည်ကို တရုတ်လို အသုံးပြုပြီး ကျွန်တော့်ခွင့်ပြုချက်မရှိပဲ သုံးစွဲတာကို တွေ့ရတဲ့အတွက် အလွန့်ကို စိတ်ပျက်မိပါတယ်။ နောက်ပြီး ကျောနံပါတ် ၂၃ ကိုလည်း ကျွန့်တော်ခွင့်ပြုချက် မရပဲ အသုံးပြုတဲ့အပြင် ကျွန်တော့် ကလေးတွေရဲ့ နာမည်ကို ပါယူပြီးတော့ သုံးစွဲပါသေးတယ်” လို့ ဆိုသွားပါတယ်။
“ကျွန်တော်က ငွေ အတွက်ကြောင့် တရားစွဲတာမဟုတ်ပါဘူး၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရရယ်၊ ကျွန်တော့်နာမည်ကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် တရားစွဲတာပါ” လို့ ထပ်လောင်းပြောသွားပါသေးတယ်။
Posted by Aung Htut at 2/24/2012 07:43:00 PM5comments
Posted by Aung Htut at 2/24/2012 01:32:00 PM 1 comments
ကဲ အကောက်လား အဖြောင့်လား ပြော.......
Posted by Aung Htut at 2/22/2012 10:27:00 AM 14 comments
ငိုသူက ငို၊ ဆွေးသူကဆွေး
Posted by Aung Htut at 2/22/2012 08:03:00 AM 10 comments
Posted by Aung Htut at 2/21/2012 08:13:00 PM 8 comments
Posted by Aung Htut at 2/21/2012 11:37:00 AM5comments
ဓာတ်လှေကားစီးဖို့ဆိုရင် ပျက်မှာတို့၊ ပိတ်မိနေမှာတို့၊ မီးပျက်သွားမှာတို့ (မြန်မာပြည်တွင်) စိုးရိမ်ကြမှာပါ။ ဒီလို 3D Illusion နဲ့ ဖန်တီးထားတဲ့ ဓာတ်လှေကားမျိုးစီးလို့ကတော့ ဘုရား၊ တရားပိုပြီး မြဲစေပါတယ်…. ရှု့စားတော်မူ…
Posted by Aung Htut at 2/20/2012 03:17:00 PM 8 comments
နှင်းခဲထဲမှာ ၂ လ ပိတ်မိနေတာတောင် အသက်ဆက်နိုင်ခဲ့တဲ့ ကိုသက်ပြင်း
ရေအသက် တစ်မနက်၊ ထမင်း အသက် ၇ ရက်ဆိုပြီးတော့ ကြားဖူးကြမှာပါ။ ခုတော့ ဟောဒီကိုယ်တော်ချောက နှင်းတောထဲမှာ ကားကို နှင်းတွေပိလို့ ကားထဲမှာ ပိတ်မိနေတာ ၂ လကျော်ကြာပါသတဲ့။ ဒီလို အချိန်မှာ သူ့မှာ စားစရာ ဗလာနထ္တိနဲ့ နှင်းတွေသာ စားခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ သောကြာနေ့ မှာတော့ ဆွီဒင်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာ အဆိုပါ ကားထဲမှာ ပိတ်မိနေတဲ့လူကို တွေ့ခဲ့တာပါ။ အသက် ၄၅ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ထိုသူဟာ ကယ်ဆယ်တဲ့ အချိန်မှာတော့ စကားတောင် ယဲ့ယဲ့ပဲ ပြောနိုင်တော့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ ပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန်က - ၃၀ ဒီဂရီ စဲစီရက်စ် ပဲ ရှိပါတယ်။ သူ့ကိုတော့ နှင်းတွေ ဖယ်တဲ့ ကားမောင်းသမားတွေက တွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ကားရှေ့မှန်ကဖုံးနေတဲ့ နှင်းတွေကို ဖယ်လိုက်တဲ့ အခါမှာတော့ အထဲမှာ သူ့ကို တွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
“စားစရာကလည်းမရှိ၊ ခရစ်စမတ်အပြီးလောက်မှာ အေးတာကလည်း ခိုက်ခိုက်တုန်နေတဲ့ကြားထဲမှာ ဒီလို အသက်ရှင်နေနိုင်တာ အံသြစရာပါ” လို့ ကယ်ဆယ်ရေးသမား တစ်ယောက်က ပြောသွားပါသေးတယ်။
Posted by Aung Htut at 2/20/2012 08:28:00 AM2comments
စာဖတ်သူများရော အိမ်သာတက်ရင်ကြာတတ်ပါသလား? အန္ဒိယမှာတော့ အိမ်သာတက်တာကြာလို့ လူသတ်မှု့ဖြစ်သွားပါသတဲ့။ မွန်ဘိုင်းဆိုတာက လူဦးရေထူးထပ်သလို ဆင်းရဲသားရပ်ကွက်တွေမှာတော့ အိမ်သာကိုလည်း ဝေမျှပြီး သုံးနေရတဲ့ဘ၀ပါ။ ဖြစ်ချင်တော့ မွန်ဘိုင်းနားက မဟမ်ရက်ကွက်မှာ စီမွန်ဆိုတဲ့ လူဟာ ည ၇နာရီလောက်ထဲက အိမ်သာဝင်သွားပါသတဲ့။ သူ့နောက်မှာ ကာဂွတ်တား ဆိုတဲ့ အဲ့ဒီရပ်ကွက်ထဲက နောက်တစ်ယောက်ကလည်း တန်းစီနေပါသတဲ့။ ဘယ်လောက်ကြာလို့ ကိုဂွတ်တားလည်း ဘယ်လောက် ချုပ်တီးထားရတယ်မသိပါဘူး…. ဟိုလူလည်း ထွက်လာရော ရန်တွေ ထဖြစ်ကြတာပါပဲ။ ဖြစ်ရင်း ဖြစ်ရင်း လက်လွန်ခြေလွန်ဖြစ်ပြီးတော့ ကိုဂွတ်တားက ခေါင်းကို ပိတ်ထုလိုက်တာ စီမွန်တစ်ယောက် သတိလစ်သွားပါတော့တယ်။ ဆေးရုံကိုတင်သော်လည်းပဲ ကိုဂွတ်တား လက်သံပြောင်လေတော့ စီမွန်တစ်ယောက် ပြန်လည်နိုးထ မလာတော့ပါဘူးတဲ့။ ကဲ…. အများသုံးအိမ်သာ တက်သူများလည်း အကြာကြီးတော့ မတက်နဲ့ပေါ့.. တော်ကြာ အန္ဒိယက ကိုယ်တော်ချော နှစ်ယောက်လို နပန်းလုံးနေရဦးမယ်။
Posted by Aung Htut at 2/19/2012 10:06:00 PM 10 comments
တိုင်းပြည်တစ်ခုမှာ ပညာရေးက ဘယ်လောက် အခန်းကဏ္ဍက ပါဝင်နေသလဲဆိုတာကတော့ တိုးတက်နေတဲ့ တိုင်းပြည်တွေရဲ့ ပညာရေး စနစ်တွေကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ်။ စာကြည့်တိုက်တွေဟာလည်း နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ ဗဟုသုတ ဟင်လေးအိုးကြီးတွေပါ။ ခုတော့ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး စာကြည့်တိုက်တွေကို ကြည့်လိုက်ကြရအောင်…..
ဒီစာကြည့်တိုက်ကြီးကတော့ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး စာကြည့်တိုက်အဖြစ် ဂင်းနစ်မှတ်တမ်းဝင်ပါတယ်။ ၀ါရှန်တန် ဒီစီမှာ ရှိတဲ့ ဒီစာကြည့်တိုက်ကြီးမှာတော့ စာအုပ်ပေါင်း ၂၉ သန်းစုစည်း ထားရှိပါသတဲ့။ ဒီဟာကြည့်တိုက်ကို ၁၈၀၀ ပြည်နှစ် ဧပြီလ ၂၄ ရက်နေ့မှ စတင်တည်ထောင်ခဲ့တာပါ။ လောလောဆယ် စာကြည်တိုက်မှုးကတော့ James H. Belington ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစာကြည့်တိုက်ဟာ အမေရိကန်ရဲ့ ရှေးအကျဆုံး စာကြည်တိုက်တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Aung Htut at 2/19/2012 12:07:00 PM6comments
Posted by Aung Htut at 2/16/2012 09:10:00 PM7comments
ဒီနေ့ ပျင်းပျင်းရှိတာနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို Google Earth ကနေကြည့်နေရင်း ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကြီးကို 3D နဲ့ တွေ့လိုက်ရလို့ ပိုစ့်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Google Earth ကတော့ Google Chrome သုံးတဲ့ Browser ဆိုရင် plug-in လုပ်လိုက်တာနဲ့ တစ်ခါထည်း သုံးလို့ရပြီးတော့ သပ်သပ်ကြီး install လုပ်စရာမလိုပါဘူး။ ကဲ လေးဆူဓာတ်ပုံ ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီးကို ဖူးလိုက်ကြရအောင်….
အနီးကပ် zoom ဆွဲကြည့်နိုင်သလို
Posted by Aung Htut at 2/15/2012 09:00:00 PM2comments
Posted by Aung Htut at 2/15/2012 03:56:00 PM7comments
နှင်းဆီပွင့်ပေါင်း ၁၇၂၅ ပွင့်ကိုသုံးထားတဲ့ ဗယ်လင်တိုင်းဝတ်စုံ
ဒီဝတ်စုံကတော့ ဗယ်လင်တိုင်းနေ့အတွက် Asda စူပါမားကတ်က နှင်းဆီပွင့်ပေါင်း ၁၇၂၅ ပွင့်ကို အသုံးပြုပြီးတော့ တီထွင်လိုက်တဲ့ ၀တ်စုံပါတဲ့။ ဒီဝတ်စုံကိုတော့ ဆုတံဆိပ်ဆွတ်ခူးထားတဲ့ Joe Massie ရဲ့ ပန်းပညာရှင်အဖွဲ့က Asda အတွက် ဖန်တီးပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ ဒီဝတ်စုံပြီးဖို့အတွက် နာရီပေါင်း ၁၆၀ ကျော်အချိန်ယူခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်…
အပြင်မှာတော့ ၀တ်လို့ရမယ် မထင်ပါဘူး… J
Posted by Aung Htut at 2/14/2012 10:13:00 PM7comments
ကိုပု တစ်ယောက် စာတိုက်ထဲသို့ဝင်လာသည်။ လူတစ်ယောက် စာတိုက်ပုံးနားတွင် သဲကြီးမဲကြီး “နှလုံးသား” ပုံပါသော တံဆိပ်ကောင်းများကို စာအိတ်ပန်းရောင်လေးတွေပေါ်မှာ ကပ်နေသည်။ ထို့နောက် ရေမွှေးပုလင်းကို ထုတ်ကာ စာအိတ်များကို ဆွတ်သည်။
ကိုပု အံသြတကြီးဖြင့် ထိုသူကို သွားမေးသည်…
ကိုပု။ ။“ခင်ဗျား ဘာလုပ်နေတာလဲ…..”
လူစိမ်း။ ။ “ဒီနေ့ ဗယ်လင်တိုင်းနေ့လေ.. အဲ့ဒါ ဗယ်လင်တိုင်းကဒ်ကလေးတွေ ထည့်ထားတဲ့ စာအိတ် အခု ၁၀၀၀ ကို ပို့ဖို့လုပ်နေတာ၊ ဘယ်သူတွေဆီကို ပို့မယ်ထင်လည်း”
ကိုပု။ ။ “ဟင်.. စာအိတ် တစ်ထောင်ကြီးများတောင်လား?၊ ဘာဖြစ်လို့ အဲ့ဒီလောက် အများကြီး ပို့ရတာတုန်း”
လူစိမ်း ။ ။ “ကျုပ်က လင်မယားတွေ ကွာရှင်းတဲ့ အမှု့တွေကို လိုက်တဲ့ ရှေ့နေ”
Posted by Aung Htut at 2/14/2012 08:35:00 AM9comments
Posted by Aung Htut at 2/13/2012 08:31:00 PM6comments
Posted by Aung Htut at 2/12/2012 04:29:00 PM 13 comments
Posted by Aung Htut at 2/11/2012 10:26:00 PM 13 comments
လွှတ်တော်ထဲမှာ ဟန်းဖုန်းနဲ့ အပြာကားခိုးကြည့်တဲ့ အန္ဒိယ၀န်မင်းများ
အန္ဒိယနိုင်ငံ တောင်ပိုင်းပြည်နယ် ကာနတ်တက (Karnataka) က ၀န်မင်း ၃ ပါးကတော့ လွှတ်တော်ထဲမှာ အပြာကားခိုးကြည့်တာ မိသွားလို့ ၀န်မင်းအဖြစ်ကနေ ရပ်စဲသွားပါသတဲ့။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ၃ ယောက်သားဒီလို ခိုးကြည့်တာမိပြီးသွားကထည်းက အဲ့ဒီ ကာနတ်တက ပြည်နယ်ရဲ့လက်ရှိ အာဏာရပါတီ (BJP (Bharatiya Janata Party) က သူတို့ပါတီဝင် ၃ ယောက်ကို ၀န်မင်းအဖြစ်မှ နှုတ်ထွက်စေခဲ့ပါသတဲ့။
၀န်မင်းတွေကတော့ သူတို့ အမှန်တကယ်ကို မကြည့်ရပါကြောင်း သို့သော်လည်း သူတို့ရဲ့ ပါတီကို မထိခိုက်စေလိုသောကြောင့် ၀န်မင်းအဖြစ်မှ နှုတ်ထွက်လိုက်ပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ကာနတ်တက မြို့တော်ဝန်ကလည်း ဒီလို ၀န်မင်းများအဖြစ်မှ နှုတ်ထွက်စာကို လက်ခံခဲ့ပါတယ်။ ရုပ်မြင်သံကြားပြကွက်မှာတော့ ကော်ပိုရေးရှင်းဝန်ကြီး (Minister of Cooperation) Laxman Savadi က အပြာပုံများကို ဖုန်းဖြင့်ကြည့်ပြီနောက် ကလေးငယ်များနှင့် အမျိုးသမီးများ ဖွံဖြိုးတိုးတက်မှု့ ဆိုင်ရာ ၀န်ကြီးဋ္ဌာန၀န်ကြီး C.C. Patil ကို ထပ်ပြီး ကြည့်စေပါသတဲ့။ ဒီတယ်လီဖုန်းပိုင်ရှင်ကတော့ ဆိပ်ကမ်းဝန်ကြီးဋ္ဌာန ၀န်ကြီး Krishna Palemar ဖြစ်ပါသတဲ့။
အစွယ်လိုသူ မိဖုရား၊ အသွားစေခိုင်းသူ မင်ဧကရာဇ်၊ လေးပစ်သူ ကျွန်တော်မျိုး ကြံဖော်ကြံဖက် ၀န်မင်းများလည်း ခုတော့ တာဝန်များမှ ရပ်စဲခံလိုက်ရပါပြီ။ အောက်မှာတော့ YouTube က ဗီဒီယိုလေးပါ။
Posted by Aung Htut at 2/11/2012 01:37:00 PM6comments
United Kingdom, Wales က ဆွမ်ဆီး တက္ကသိုလ်မှာတော့ အိမ်သာ အသုံးပြုနည်း လမ်းညွှန် ပိုစတာများကို ကပ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒီ Swansea Universityမှာ တက္ကသိုလ်အိမ်သာတွေ ညစ်ပတ်လာလို့ ဒီလိုမျိုး ပိုစတာတွေ ကပ်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒီလို ညစ်ပတ်တာတွေကလည်း ယဉ်ကျေးမှု့မတူညီတဲ့ နိုင်ငံခြားမှ လာရောက်ပြီး ပညာသင်ကြားနေတဲ့ ကျောင်းသားများကြောင့်လို့ ဆိုပါသတဲ့။ တက္ကသိုလ်က ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတော့ “ဒီလို ပိုစတာတွေ ဖြန့်ဝေရတာကတော့ ယဉ်ကျေးမှု့မတူညီတဲ့ နိုင်ငံကလာတဲ့ ကျောင်းသားတွေဟာ သူတို့ နိစ္စဓူဝအတိုင်း အလေးအပင်တွေကို ဖြေရှင်းရင်းနဲ့ အိမ်သာတွေကို ပျက်စီးစေတာတို့၊ မသန့်ရှင်းစေတာတို့ ဖြစ်သွားစေတတ်ပါတယ်” လို့ ဆိုသွားပါတယ်။
Posted by Aung Htut at 2/11/2012 09:48:00 AM2comments
Facebook ပေါ်က သူငယ်ချင်း ၁၅၂ ယောက်ရဲ့ပုံကို Tattoo ထိုးတဲ့ မိန်းကလေး
လူတွေ Facebook ဆိုတဲ့ လူမှု့ရေးကွန်ယက်ကို အသုံးများလာတာနှင့်အတူ Facebook ကိုစွဲလမ်းလာကြပါတယ်။ တစ်နေ့ကို Facebook တစ်ခါလောက်မှ မ၀င်ရရင် နေမထိထိုင်မသာ ဖြစ်တဲ့ ရောဂါဟာ ကျွန်တော်အပါအ၀င် လူအတော်များများမှာပါ စွဲကပ်နေပြီလို့ ထင်ပါတယ်။ ဒီအမျိုးသမီးကတော့ ထူးထူးခြားခြား သူ့သူငယ်ချင်း ၁၅၂ ယောက်ရဲ့ Profile Picture တွေကို ညာဖက်လက်မောင်းပေါ်မှာ ဆေးမှင်ကြောင် ထိုးပါသတဲ့။ ထိုးပြီးသကာလမှာလည်း သူမရဲ့ Facebook Status မှာ ဟောသလိုရေးသေးသတဲ့
Posted by Aung Htut at 2/10/2012 10:10:00 PM6comments
လက်ထပ်ခွင့် တောင်းတယ်ဆိုတဲ့ အချိန်ကလေးဟာ ချစ်မြတ်နိုးရသူတစ်ယောက်ကို မျှော်လင့်ချက်များစွာနဲ့ နှစ်ယောက်သား ဘ၀လက်တွဲဖို့ တောင်းခံကြတဲ့၊ စိတ်လှုပ်ရှားမှု့ အပြည်နဲ့ အချိန်ကလေးပါ။ ဒီလိုပဲ အဲ့ဒီ အချိန်ကာလေးဟာ ဘ၀ရဲ့ မမေ့နိုင်စရာ အဖြစ်အပျက်ကလေးပါ။ လက်ထပ်ခွင့် တောင်းတဲ့ ကျွန်တော်တို့အတွက် စိတ်လှုပ်ရှားမှု့ ဖြစ်ရသလို၊ ခွင့်တောင်ခံရတဲ့ မိန်းကလေးမှာလည်း ဒီလိုမျိုး စိတ်လှုပ်ရှားမှု့လေးတွေနဲ့ မမေ့နိုင်စရာ အချိန်ကလေးပါ။ ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ရော ကိုယ်ချစ်တဲ့ လူကို ဘယ်လိုမျိုးနဲ့ လက်ထပ်ခွင့် တောင်းခံဖို့ ရည်ရွယ်ထားပါသလဲ?
အောက်မှာတော့ စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းလှတဲ့ လက်ထပ်ခွင့်တောင်းခံတဲ့ ဗီဒီယိုကလေးတွေကို YouTube ကနေ ရှာဖွေပြီးတော့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ လက်ထပ်ခွင့်ပန်ဖို့ ရည်ရွယ်သူများလည်း ထူးထူးခြားခြားလေး အိုင်ဒီယာလေးတွေနဲ့ ကိုယ့်ချစ်သူကို Propose လုပ်နိုင်ကြပါစေဗျား…………..
Posted by Aung Htut at 2/10/2012 10:18:00 AM4comments
ပြည်တော်ပြန်ချင်သည်။ သို့ရာတွင် ပြည်တော်ပြန်ပြီး ဘာလုပ်ရမည်နည်း ဆိုသည်ကို မသိသည်က ဆိုးသည်။ ကိုယ့်ပြည်ကိုယ့်ရွာမှာ ကိုယ့်တိုင်းပြည်က အစားအစာတွေစားပြီး နေချင်သည်။ မြန်မာပြည်ရဲ့ လယ်ကွင်းစိမ်းစိမ်းလေးတွေလွမ်းသည်၊ မနက်တိုင်း ကောက်ညှင်းပေါင်းပူပူလေးကို နှမ်းလေးဖြူးစားရတာကို သဘောကျသည်။ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကိုလွမ်းသည်။ Brain Drain ဆိုပြီး အော်နေကြသည်။ Brain Drain မှာ အကျိုးအမြတ်ရသတဲ့၊ ဆုံးရှုံးမှု့တွေရှိသတဲ့။ စုံသည်။ ဆရာကြီး ဦးအောင်သင်းရဲ့ စကားတစ်ချို့ကို မှတ်မိသည်။ လူငယ်တွေ နိုင်ငံခြားကို သွားပြီးတော့ စီးပွားရှာကြသည်။ ထိုအတွက် အချိန်တွေ ရင်းနှီးကြသည်။ ထိုအချိန်အတွင်း ပိုက်ဆံသာမက အတတ်ပညာကိုပါ ရှာမှီးရန်လိုသည်။ အနှီ အတတ်ပညာကို အခြေပြုပြီး ပိုမိုမြင့်မားသော အဆင့်အတန်းကို ရောက်ရန် ကြိုးပမ်းသင့်သည်။ မဟုတ်ပါက အရွယ်၏ ဆုံးရှုံးမှု့ကို ပြန်ကုစား၍ မရနိုင်။ ကြိုးစားသူများကလည်း ကြိုးစားကြပါသည်။ ရွှေပြည်တော် မျှော်တိုင်းမဝေးတော့ဟု အားတော့ တင်းထားသည်။ ဘယ်တော့လည်းတော့ မသိ။
Posted by Aung Htut at 2/09/2012 02:27:00 PM5comments
Labels: ကျွန်တော်နှင့် အပိုင်းအစများ, စကားစုလေးများ
Posted by Aung Htut at 2/09/2012 12:27:00 AM 13 comments
ခေတ် အဆက်ဆက်ဆိုပေမယ့် ကုန်းဘောင် ခေတ်ကတော့ ရှာလို့ မတွေ့တာနဲ့ မတင်ဖြစ်တော့ပါဘူး။
ဒါကတော့ ဟိုး ပဝေသဏီ ပျူခေတ်တို့ တဂေါင်းခေတ်တို့က ဒင်္ဂါးတွေ ဖြစ်ဟန်တူပါတယ်။
Posted by Aung Htut at 2/08/2012 12:08:00 PM 8 comments
Bu၊ Chu နဲ့ Fu ဆိုတဲ့ တရုတ် ၃ယောက်ဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံကို တရားမ၀င် ခိုးပြီး ၀င်ရောက်လာပါသတဲ့။ ဒီလိုနဲ့ အမေရိကရောက်ပြီဆိုတော့ တရုတ်နာမည်တွေနဲ့ နေလို့တော့ မဖြစ်ချေဘူး။ အင်္ဂလိပ်နာမည်ပေးကြမယ်ဆိုပြီးတော့ Bu က Buck ဆိုပြီး နာမည်ပြောင်းလိုက်ပါတယ်။ Chu ကတော့ Chuck ဆိုပြီး နာမည်ပြောင်းလိုက်ပါတယ်။ ဒါကို အားကျတဲ့ Fu တစ်ယောက်ကတော့ ဟိုနှစ်ယောက်နည်းတူ နာမည်ပြောင်းလိုက်တာ ပြန်အပို့ခံလိုက်ရပါလေရော။
Posted by Aung Htut at 2/07/2012 10:21:00 PM4comments
အင်တာနက်မှာ တွေ့သမျှ စိတ်အပန်းဖြေစရာပုံလေးတွေကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်...... စိတ်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေသူများ စိတ်ပြေလက်ပျောက် ကြည့်ရင်း ရယ်မောပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေသောဝ်.....
အရေးကြီးတာက အရေးကြီးတာပဲ..... ဟဲ ဟဲ ဟဲ
Posted by Aung Htut at 2/06/2012 07:20:00 PM 12 comments
Posted by Aung Htut at 2/06/2012 01:01:00 PM3comments
ဒီဓာတ်ပုံတွေကတော့ William Saunders တဲ့ ဗြိသျှဓာတ်ပုံဆရာ က ၁၈၆၃ခုနှစ်ကနေ ၁၈၈၈ အတွင်းမှာ ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ရှန်ဟိုင်းမြို့မှာ “Sentai Museum” ဆိုတာကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာတော့ ပါတော်မူ အချိန်နဲ့ မတိမ်းမယိမ်းရှိလေတာမို့ အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက ရှန်ဟိုင်းကို အလည်တစ်ခေါက် လေ့လာကြည့်ကြပါစို့ဗျာ။
ဒါကတော့ ရှေးခေတ်က ရှန်ဟိုင်းမြို့မှာ ရိုက်ကူးထားတဲ့ သတို့သား၊ သတို့သမီး ပုံပါ
Posted by Aung Htut at 2/05/2012 10:26:00 PM 12 comments
အတွေ့အကြုံရှိတာ တစ်ပန်းသာတယ်၊ ဒါပေမယ့် ပညာရေးလက်မှတ်က ပိုထိရောက်တယ်
ဒီပုံပြင်ကလေးက အလုပ်လုပ်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ရယ်စရာမောစရာပြောတာကို သဘောကျလို့ ဇာတ်အိမ်အကြမ်းလေး တည်ပြီးရေးလိုက်တာပါ။ မူရင်းက ဘယ်ကမှန်းတော့ မသိပေမယ့်၊ သူဖတ်ပြတာကတော့ မေးလ်ထဲကရတဲ့ တရုတ်စာနဲ့ ရေးထားတဲ့ဟာလေးပါ။
တစ်ခါတုန်းက ကိုဘမောင်ဆိုတာက နာမည်ကြီး ဓားပြ၊ တပည့်တပန်းကလည်း များလေတော့ သူ့ ဓားပြအဖွဲ့ကြီးက စည်စည်ကားကားကြီးပေါ့လေ။ သို့ပေမယ့် ကိုဘမောင်ဟာ အတန်းပညာတော့ မတတ်ရှာပေဘူး။ တစ်ခုခုမေးကြည့်ပါလား “ဒီမှာ ဘာမောင်တို့က လက်ရဲတယ်၊ ဓားထိုးပက်စက်တယ်၊ ခေါင်းခြောက်စရာတွေ လာမမေးနဲ့ မိုက်လို့ ဓားပြဖြစ်နေတာ” လို့ ပြန်ပြောလိမ့်မယ်။
ဒီလိုနဲ့ တစ်နေ့ကျတော့ ဘမောင်တို့ လူစု အစိုးရ ဘဏ်တစ်ခုကို ၀င်ပြီးတော့ ဓားပြတိုက်ကြပါလေရော…..
“လက်မြှောက် မလှုပ်နဲ့၊ စဉ်းစားကြည့်စမ်း ပိုက်ဆံက နိုင်ငံတော်ပိုင်တာ၊ အသက်က ခင်ဗျားပိုင်တာ ကြိုက်တာကိုရွေး” ဆိုပြီး ကိုဘမောင်က ခပ်တည်တည်နဲ့ ပြောလောတော့ ဟိုကလည်း သူ့အသက် သူချစ်လေတော့ ပိုက်ဆံထုတ်တွေ ပေးလိုက်သတဲ့။
ဒါနဲ့ ဓားပြတိုက်ပြီး ပြန်လာတော့ သူ့တပည့်တွေက ဆရာကြီးကို “ဆရာကြီး ကိုဘမောင်၊ ကျွန်တော်တို့ တိုက်ခဲ့တာ ဘယ်လောက်တောင်ရသတုန်း ဗျ” လို့ မေးပါသတဲ့။
ကိုဘမောင်က “ဟဲ့ကောင် ငတုံးတွေ၊ ပိုက်ဆံက ဘယ်လောက်လဲ စစ်စရာကို မလိုတာ… မနက်ဖြန် သတင်းစာထဲကို ကြည့် ငါတို့ တိုက်လို့ ငွေ ဘယ်လောက် ဘဏ်က ပါသွားသလဲဆိုတာ သိမှာပေါ့ ဟ” လို့ ပြန်ဖြေတယ်ဆိုရင်ပဲ တပည့်တွေက အော်.. ဒါကြောင့် ဘမောင်၊ ဘမောင်လို့ နာမည်ကြီးနေတာကိုးလို့ ချီးမွန်းလေသတဲ့။
အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ ဓားပြတိုက်ခံလိုက်ရတဲ့ ငွေကိုင်စာရေးလေးက သူ့မန်ဂျာဆီသွားပြီးတော့
“ဆရာရေ… ခု ကျွန်တော်တို့ဘဏ်ကနေပြီးတော့ သိန်း ၂၀ ဖိုး ဓားပြတိုက်ခံလိုက်ရတဲ့ အကြောင်းကိုတော့ ချက်ချင်း ရဲစခန်းကို အကြောင်းကြားမှဖြစ်မယ်” လို့ဆိုလေတော့
“ဟဲ့ကောင် ငတုန်း၊ နလပိန်းတုန်း၊ အထူအပါးနာမလည်တဲ့ အကောင်၊ ခုအတိုက်ခံလိုက်ရတာ သိန်း ၂၀၊ အဲ့ဒါမျိုးကို သိန်း ၇၀ ပါသွားတယ်လို့ သတင်းပို့ရတယ် ဒါမှ ငါတို့ ဖျောင်ထားတဲ့ သိန်း ၅၀ က စာရင်းပျောက်သွားမှာ”လို့ ဆိုလေသတဲ့။
ဒီလိုနဲ့ နောက်နေ့ သတင်းစာထွက်လာတော့ သိန်း ၇၀ ဖိုး ဓားပြအတိုက်ခံလိုက်ရတဲ့ အကြောင်းပါလာလေသကိုး။ အဲ့ဒီလိုနဲ့ ဓားပြတွေ ငွေဝေစုခွဲတဲ့ အချိန်ရောက်တော့ မှ သိန်း ၂၀ ပဲ ရှိတာကို သိလိုက်ရတဲ့ ကိုဘမောင် တစ်ယောက်ကတော့ ဒီလိုလေး ငိုသံကြီးနဲ့ ပြောလိုက်လေသတဲ့
“သြော်….ငါတို့မှာတော့ အသက်စွန့်ပြီး တိုက်လိုက်ရတာ၊ တစ်ကယ်တမ်းရတော့ သိန်း ၂၀။ ဟို မန်နေဂျာဆိုတဲ့ အကောင်ကတော့ စားပွဲပေါ်မှာ ကော်ဖီလေးသောက်ပြီး ရသွားတာက သိန်း ၅၀၊ ကောင်းကြသေးရဲ့လား အရပ်ကတို့ရေ……”
Posted by Aung Htut at 2/03/2012 12:09:00 PM7comments
တရုတ်နိုင်ငံ ကျစ်ကျန်းပြည်နယ် အရှေ့ပိုင်းမှာတော့ ဒိုင်နိုဆော မျိုးစိတ်သစ်တစ်မျိုးကို တရုတ်နှင့် ဂျပန် သိပ္ပံပညာရှင်တွေက ထပ်မံတွေ့ရှိတယ်လို့ ဆင်ဟွှာ သတင်းဋ္ဌာနက ကြေညာသွားပါတယ်။ တစ်ကယ်တော့ ဒီ ဒိုင်နိုဆော အရိုးစုကို ရှာတွေ့တာက လွန်ခဲ့သော ၁၃နှစ်၊ အဝေးပြေးကားလမ်းမ ဖောက်လုပ်ချိန်တုန်းကထည်းက တွေ့ရှိတာဖြစ်ပြီး တွေ့ရှိတဲ့နေရာလေးကတော့ ထျန်းတိုင် ခရိုင်နားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို တွေ့ရှိတဲ့ ဒိုင်နိုဆောအရိုးစုကို ၃ နှစ်ကျော်လောက် သေသေချာချာလေ့လာပြီးတော့မှ ဒီလိုမျိုး မျိုးစိတ်အသစ်ဖြစ်တယ်လို့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေက ကောက်ချက်ချတာပါလို့ ကျစ်ကျန်း သဘာဝ သမိုင်းဆိုင်ရာ ပြတိုက်က ဘူမိဗေဒသိပ္ပံပညာရှင် ကျန်းဝမ်ကျိ ကပြောသွားပါတယ်။
ခုတွေ့တဲ့ မျိုးစိတ်သစ်ကကိုတော့ “Yueosaurus Tiantaiensis” လို့ နာမည်ပေးထားပါတယ်။ တရုတ်လိုဆိုရင်တော့ တျန်းတိုင်ရွ ဒိုင်နိုဆော“Tiantai Yue Dinosaur” လို့ ခေါ်ပါတယ်။ “ဒီ ဒိုင်နိုဆောမျိုးက အပြေးသန်ပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ သေးငယ်ပါတယ်။ ဒီလို အပြေးသန်တော့မှ အသားစားတဲ့ ဒိုင်နိုဆော ကြီးတွေရန်ကနေ လွတ်အောင် ပြေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်” လို့ ကျန်းက ဆိုသွားပါတယ်။
Posted by Aung Htut at 2/02/2012 10:55:00 PM2comments
စပိန်နိုင်ငံ၊ Sodeto လို့ ခေါ်တဲ့ ရွာကလေးမှာတော့ မက်ဒရစ်မြို့ကြီးရဲ့ မြောက်ဘက်အစွန်းမှ ရှိတာပါ။ တစ်ရွာလုံးမှာတော့ လူဦးရေ ၂၅၀ လောက်ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီမြို့ကလေးမှာတော့ မကြုံစဖူး ထူးထူးခြားခြား အဖြစ်အပျက်လေး တစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါကတော့ တစ်ရွာလုံး ဒေါ်လာ သန်း ၉၅၀ ဖိုး ထီဆုကြီး ရဲ့ ဆုငွေတွေကို အချိုးချ ခွဲပြီး ရသွားတာပါ။ အဲ့ဒီ အထဲမှာ ပိုပြီး ထူးဆန်းတာက Costis Mitsotakis ဆိုသူ ကတော့ သူ့တို့တစ်ရွာလုံး ထီပေါက်တဲ့အထဲမှာ တစ်ယောက်ထဲ ကံဆိုးသူမောင်ရှင်ဖြစ်သွားရရှာပါတယ်။
ဖြစ်ပွားပုံက ဒီလိုပါ - ဒီထီပေါက်စဉ်ဟာ စပိန်နိုင်ငံမှာတော့ နှစ်ပေါင်း ၂၀၀ ကျော်သက်တမ်းရှိပြီဖြစ်တဲ့ “El Gordo” ဆိုတဲ့ ထီဆိုင်ကပါ။ ဒီနှစ် စပိန် ခရစ်စမတ်အတွက် ထီပေါက်စဉ်မှာတော့ အဲ့ဒီရွာကလေးကနေ ထီလက်မှတ်ပေါင်း ၇၀ ကျော်ဟာ ထီပေါက်စဉ်ထဲမှာ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီ ဆီဒိုတိုဆိုတဲ့ ရွာကလေးနဲ့ အနီးအနားက ရွာတွေဟာ အခုလို ခု ဆွတ်ခူးခဲ့တဲ့ ထီနံပါတ်တွေကို ဆင်တူ ၀ယ်ယူခဲ့ကြပါတယ်။ ထီလည်းထွက်ရော လက်မှတ်တစ်စောင်ကို ဒေါ်လာ ၅သောင်း ၂ ထောင်ကျော်ဖိုး ဆွတ်ခူးခဲ့ပါသတဲ့။
ဒီအတွက် ကံဆိုးသူ Costis Mitsotakis ကတော့ ကိုယ့် နဖူး ကိုယ်ရိုက်ဖို့သာ ရှိပါတော့တယ်။ Mitsotakis ကတော့ “ ကျွန်တော် ဒီလို ထီပေါက်တဲ့ အထဲမှာ မပါခဲ့ရလို့ စိတ်မကောင်းပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကံကောင်းတာလေး တစ်ခုတော့ရှိပါတယ်။ ဒါကတော့ ကျွန်တော့် အိမ်နီးချင်းက ကျွန်တောင် ရောင်းထုတ်ချင်နေတဲ့ ခြံကလေးကို ၀ယ်သွားတာပါ” လို့ Times သတင်းစာကို ပြောသွားပါတယ်။
ဒီရွာသားတွေထဲက အများစုကတော့ လယ်သမားတွေနဲ့ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ ၀င်လုပ်နေရတဲ့ အလုပ်သမား လက်လုပ်လက်စားတွေဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်မရှိတဲ့ လူတွေလည်း တောင်တောင်လေးများခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုတော့ အားလုံး ဒေါ်လာ သန်းချီတဲ့ ငွေပုံကြိးပေါ် ထိုင်နေကြပါပြီ။
Posted by Aung Htut at 2/02/2012 02:36:00 PM3comments
အပိုင်း ၁ မှ အဆက်............
အရင် အပိုင်း ၁ မှာတုန်းက hacker ၃ ယောက်အကြောင်း ရေးခဲ့ပါတယ်။ အခု အပိုင်း ၂ မှာတော့ hacker တွေ တော်တော်များများရဲ့ အကြောင်း စုံအောင်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။
Posted by Aung Htut at 2/01/2012 12:59:00 PM2comments
ယုံချင်ယုံ မယုံချင်နေ စင်္ကာပူ ဖုန်းရွှေ ပုံပြင်များ ...
အိမ်သာ အသုံးပြုနည်း လမ်းညွှန်ထုတ်ဝေလိုက်တဲ့ တက္ကသိုလ...